Soyaalka shibil . Q2aad. – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
Soyaalka shibil .
Sida aan kusoo xusnay qormadii hore, waxaan uga soo sheekaynay tariikh aqooneedka, sheekh shibil. Aqoonta diini, iyo tan maadi ee uu sheekhu bartay intii uu afkiisa ka sheegay. Maadaama aqoontiisa diimeed aysan gaarsiisnayn maqaam sheekh-nimo , hadana bulshada soomaliyeed waxaa ka muuqata sida ay u ciseeyaan kooda faatixada barta, een xita fasirkeeda aqoon.
Wadaadkani waxa uu ku caan baxay af lagaadayn-ta dadyaw-ga ay isku khilaafaan fahanka diimed iyo kan caqiideed, waxa uuna si cad ugu bareera gaalaysiinta, dadyaw anan afkooda ka qiran gaalnimo, iyo inay diinta banaanka ka yihiin.
Marar badan oon daalacday khudbado iyo su,aalo la waydiinayo wadaadka, waxaa ka dhex muuqday fahan yarida diimeed iyo fudaydka ka haysta, mas,alooyin badan ooy culimadu badankood aysan ku dag dagin . Hadaan tusaala-yaal koobana ka soo qaadano muqaaladii laga duubay, waxa ka mid ahaa muqaal lagu waydiiyay su, aal ah :” sheekhow islaantaydu talefaykaga ayaan uga maaro la,ahay een see yeelaa?”.
Waxa uu si cad ugu jawabay inay furiin mudantahay, kalmada “Furiin” ee uu sheekhu sida dhibta yar isaga oo kursiga ku dan-gigaa u adeegsaday waan dareemi karnaaa halka ay diintu ka taagantahay, iyo sida aanan loogu dagdagin duminta qoys muslim ah. Maxaa sababaya buuq talefan ka dhashay,inuu wadaadku heer furiin kusoo gaba gabeeyo, isagoo heli kara wadooyin kale, oo ka baaajin kara kala taga iyo duminta guriga? ” malahaygu waa fudaydka iyo aqoon yarida haysata “
Fudaydka wadaadka waxa kaloo kamid ah gaalaysiinta dadyawga aanan wali afkooda ka sheegan gaalnimo, se ay isku khilaafeen kana biyo diideen fikirka isaga iyo inta la jaad ahi ay qabaan. Sheekh shibil wax yar ka hor waxa uu baadil ku tilmaamay, qolyo cusub, Oo kusoo biiray suuqa diinta, kuwaas oo uu ku eedeeyay fudaydka iyo galaysiinta aan loo meeldayin, ay bulshada ku hayaan , se taa badalkeed waxaa ka muuqata isaga iyo xertiisu inay dhanka gaalaysiinta kaga horeeeyaan, kagana danbeeyaan kuwa uu dusha u saaray.
” sheekhadu ma inagay kootada, gaalaysiintu inoo xirantahay baa ?”
Ku alahoodee, waxa laga sheegaa, naadi diimeedka uu shibil ka tirsanyahay loona yaqaan ” al ictisaam” inay umada u horseedeeen jahlinimada diimeed iyo mayal adeega aan meelna haysan, ayna leeyihiin garab hubaysan, se qar soodi ah, kuwaaso markii ay fatwo gaalaysiin ahi soo baxdo amar ku qaba inay bar tilmaameed ka dhigtaan, dayawga loo dabray, unuunkana ka gooyaan .
Huumaaga ka jira arinkan ah garabka hubaysan ee xisbigan, waxa sii cadaynaya qoladii ay seeraha dhaafiyaanba, inay amar ku siiyaan towbad keen, aan la aqoon waxa laga towbad keenayo, “ma diintaa mise xisbigoodaa, loo towbad keenaya? Mooyi”.
Si walbay ahaato sheekha iyo xertiisu waxaad moodaa, inay isku dhaqan egyihiin taliskii siyaad bare, ee qofkii wax ka sheega amaba ka qoraa, qoorta loo casayn jiray ama dalka laga gaalaysiin jiray dibad joogna laga dhigi jiray .
Hadaba maxay is dhaamaan kan ciidiisii laga musaafuriyay , iyo midka diintiisa laga musaafuriyay?
Sow labaduba gaalaysiin magacyo gooni ah lagu sii xardhay maaha?
QALINKA MUHSIN JAMA